Caledonia inouya kuupenyu | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Chitarisiko / Kuita munhu
Kana iwe uri mushandisi we KDE SC unogona kunge uchiziva kuti chii Caledonia, asi kana usiri, ndinokuudza: Imwe yeakanakisa uye akazara madingindira eiyi Desktop Nharaunda.
Zvese izvi, zviripo zvekurodha mahara kubva pane iyi link:
Dhawunirodha Caledonia 1.5
Inochinja izvo Caledonia yasvika iyo 1.5 version, inowirirana ne KDE SC 4.11 uye neshanduro dzakakwirira.
Caledonia Ikozvino kunouya nezvidiki zvidiki kune iyo Plasma theme, kuvandudzwa kweZviziviso, Plasmoids, mitsva mitsva uye zvimwe shanduko izvo zvatinoona mukati iyo blog yemusiki wayo.
Pamwe pamwe neshanduko yemusoro wenyaya, uye new seti yeMapikicha, webhusaiti yeprojekti yakagadziridzwawo, saka ikozvino pane chikamu chitsva kwaunogona kutarisa nekukurumidza pane zvese Caledonia inounza nayo.
Kunyanya, ndanga ndichiiyedza uye inotaridzika kunge yakanaka kwazvo, asi pane chimwe chinhu chiri mu hover yeTask Manager patinoisa chituko pairi, iyo isingandibvumidze uye ini ndinofunga, inokanganisa kubva kune rimwe basa.
Zvakangodaro, Caledonia inokodzera kuyedzwa uye kushandiswa. Ikoko ndinovasiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Caledonia inouya kuhupenyu
Kudzoka kuupenyu? Akambofa here? xD
Ndatenda nechinyorwa, nenzira. Ini handizive chaizvo zvaunoreva neane basa maneja hover, iwe unogona kunyatso kujekesa kana kuisa hove?
Izvi .. chinhu chinodzoka kuhupenyu ndechekupa inoshamisa toni kune iyo yekuti unodzoka kutangazve chirongwa ichi hahaha, ndiko kuti, isu tine itsva vhezheni. 😛
Nezve hover, ndakazvitaura kamwe pa Twitter, asi ingori nyaya yekuravira. Ndinoyeuka iwe wakandiudza kuti iwe waive waigadzirira Caledonia iwe pachako, uye nemaitirwo acho iwe wakaifarira, uye nemabatiro andinozviita izvozvo, nekuti ini handina kukuudza chimwe chinhu. Nekudaro, ini ndinokuyeuchidza zvandiri kureva:
Ipo Window Manager iri yakajairika, inotaridzika kunge inotonhorera nemutsara uri pasi pechinhu chimwe nechimwe (windows yakavhurika kana kuderedzwa), asi pandinosvetuka pamusoro payo, ndinoona shanduko kune grey square ine mativi akapoteredzwa akashata. Ndizvozvo chete, asi sekukuudza kwandakaita kare, ingori nyaya yekuravira. Nguwani yangu yatorwa kubasa kwaunoita.
Ahh, uye unogamuchirwa murume. Izvo zvakanaka zvinofanirwa kusimudzirwa 😀
Zvangu nekuremekedza Malcer ndinokurangarira kubva kuchikoro chekare pawanga uri muMandrake kana Mandriva sekuzivikanwa kwazvo ...
Nguva huru idzo maMandriva aive akakura kwazvo ... Asi muchidimbu, zvese zvinhu zvinogara zvichitenderera. Ndinoyemura avo venyu vanoramba vachitsigira Mageia uye pamwe ikozvino OpenMandriva.
Ah hongu, ndinorangarira. Tsanangudzo mu grey. Ehe, hazvo, izvo hazvichinje izvozvi. 😛
Paunenge uchiedza kushandura dingindira, zvinozoitika kuti maratidziro etsamba panhepfenyuro haatyise, mavara akasviba uye anotaridza zvinosemesa, izvo hazviitike kana ndikaisa vhezheni 1.2 iyo yainopa mukugadzirisa system uye zvinonyadzisa nekuti ndinoifarira yakawanda caledonia asi zvinoita sekunge mune yangu pachezvangu nyaya, pachinzvimbo chekushongedza, ini ndinoshatisa kutaridzika kwepaneru
kuisa mu manjaro ndoitei?
Saka pasina "sudo" asi handizive kana vaine yakagadziridzwa.
Frank, ndiri paManjaro KDE uye ini ndichangobva kurodha pasi downloader ndokukenya. Iyo yaibva yandibvunza yekusimbiswa uye ndokutanga kurodha pasi.
Ini ndaisafanirwa kutendeukira kuneyourt.
Ndine xfce sedesktop, ndinodzvanya uye hapana.
Ndiyo dingindira iri re KDE desktops, iyo inoshandisa QT. Zve XFCE, unofanirwa kuzviwanira iwo iwo musoro weGTK +.
uye ini ndinoisa sei iyo gtk theme?
MuXFCE inofanirwa kuve yakajeka, asi iwe unogona kuwana iwo musoro wenyaya paDeviantArt.
Izvo ndezve KDE chete.
Iri iguru basa rehunyanzvi, ndakarishandisa kakati wandei, ndisati ndauya kuzoisa distros ne KDE hehehehe, asi ikozvino zvandine iyo KDE desktop nharaunda zvakare ini ndinoedza zvakare.
Muchokwadi, chimwe chinhu chandakagara ndichichengeta kubvira pandakatanga kushandisa Caledonia ndechekuti ndiyo chete theme yeplasma inoshanda chaizvo mukudzika.
Kwete, ini handireve kutaura kuti mamwe acho akaipa, asi hapana anoshanda mune zvakadzama riini iri. Ndicho chimwe chezvikonzero nei vanhu vazhinji vachiwana Gnome "yakanaka" nekuti, nekuda kwechimwe chikonzero chisingazivikanwe, avo vanga vachigadzira madingindira eGnome neGTK vakaita mabasa anoshamisa ... Elementary, Numix Zvakadaro? Ivo vanhu vakanyatsoisa simba rakawanda muzvinhu zvavo.
KDE haina vashoma sevanhu vakadaro, Malcer akaita basa rekutanga uye harigone kurambwa, asi KDE haina vamwe vagadziri, pamwe imwe dingindira remhando imwechete seCaledonia uye, nekuda kwaKristu, iri nani icon basa, chaicho chinotevera kuyerera kweKDE.
Zvinosuruvarisa kuti chirongwa cheCaledonia Icons hachikwanise kupihwa yekutevera, asi iwo hwaro hwakanyanya, hwakanaka kwazvo kubva kwazvinotangira, zvinosuwisa kuti handisi uye handizogadziri (ini handishande, handimire pabhora mune izvo) , asi ini ndichine simba mukutaura kuti iyo caledona mifananidzo pasina mubvunzo yakanaka pokutangira uye yekutanga base.
Ndinoda KDE kutora mifananidzo yakadai seNitrux kana Betelgeuse nekumira, vanoenderana nemaitiro avo zvakare.
Hmmm handifunge kudaro, nitrux haina kushata, asi iwo ma "squared" mapikicha haasi emunhu wese, uye haazorodzwe zvekushandiswa nenzira iyoyo.
Mifananidzo yakanaka yakaita sepakutanga, yakatsetseka uye ine yakapfava dhizaini inotora dzakasiyana siyana. Mifananidzo yeCaledonia, kunyangwe isiri inoshamisa, uye iye musiki pachake akataura kuti vakashata, chokwadi ndechekuti inzvimbo inonakidza kubva kwazvinofanira kutanga, dai zvaishandiswa nenzira yekuti vakamomesa hutera hwavo kunge dhairekitori ma icon, ndinofunga iyo ingave iri sarudzo yakanaka kwazvo.
Ndinoshuva kuti Steam hwindo rewindows raivepo kune ese ari maviri GTK + uye QT. Ivo vakangonaka.
Mhoro nano, ndinonzwisisa zvauri kutaura pamusoro pevakawanda ve KDE vagadziri vaizodiwa, uye ini ndinobvuma, asi ini ndinofunga dambudziko harisi rakanyanya kushomeka kweshungu kubva kuvateveri ve KDE, asi asi imhosva yechikwata che KDE pachayo. zvinoita kunge chinoita basa rayo rechikoro nekumisikidzwa kwese zvachose.
Ini ndiri nyanzvi graphic dhizaini (3D, 2D ini handitombo kudzora, yechikamu changu uye zvimwe zvishoma), uye, kunyangwe ini ndichinzwisisa huzivi hwemahara software, chishuwo chekuvandudza yako yaunofarira graphic nharaunda uye kuigovana nevamwe, izvo hazvipe idya. Hongu, zvingave zvakanaka kwazvo kana mipiro ichinyatsoratidza basa nekuedza kunoenda mukuita chimwe chinhu chakadai, asi chokwadi ndechekuti mipiro munyika yeGNU / Linux haina kuwedzera kunyangwe kukura kwevashandisi vayo. Usandibata zvisirizvo, hazvireve kuti ini ndinongoshandira mari chete, ndinogona kudada kana ndaive ndakakwanira kuita yakanaka nyanzvi yekutarisisa dingindira reKDE kana chero imwe nharaunda uye ndikazviita, asi ichi hachisi chinhu chinogona kuitwa. Kuzviita muawa 1 yemahara pazuva, zvinoda rimwe basa randinofungidzira. Iwe haugone kubvunza yehunyanzvi kutaridzika iyo inochengeta iyo yakazara dingindira kumusoro-kune-padanho nezvose zvavandudzwa kana vanhu vasiri kuda kunyatso kutsigira zvemari kana kuibhadhara.
Ndine urombo kusava netariro nezvazvo, asi ndinozvitora sezvisinganetsi kuti nguva yemahara haina kukwana kuita chimwe chinhu chakadai, zvinoda timu yese yakazvipira kwazviri, uye izvo zvinoshandura mukushanda usingazive kana uchizozviita kusvika kumagumo. mwedzi. Pfungwa yakarongwa nesoftware yemahara yakazara zvachose munyika yatiri kugara mairi izvozvi, haugone kubvunza elm yemapeya, ndosaka ndichifunga kuti KDE, inova iri huru, nekuti izvozvi iri kungogadzirisa izvo zvatovepo , Inofanirwa kuyedza kugadzirisa iyo default aesthetics.
mune deviantart pane chete kde.
Nechimwe chikonzero chisinganzwisisike paunenge uchiisa iwo musoro muKubuntu 13.10 zvinoita kunge iwo Oxygen theme (nhema): S Pane chero munhu angandibatsira nedambudziko iri?
Iwe unofanirwa kudzima mafaera mune echinguvana / var / tmp dhairekita rine hukama nekaledonia
Pandakaedza caledonia mukutanga kwekutanga uye Mandriva paakaiisa nekukasira muOS yayo, zvakandisiya ndichishamisika, zvinosuwisa panguva iyoyo ndakanga ndisina pc ine simba rakakwana kuti ndinakirwe nehunhu hwayo uye nemifananidzo, kunyangwe izvozvi ndiri kuzviona. yakavandudza Izvo zvichiri kurema kushandisa pane yechinyakare Netbook. Asi ini ndinokurudzira zvikuru kuishandisa uye kuyedza ...
Pindura kuna dGuillen
Iyi suite muenzaniso wekutevera. Malcer ndomumwe wevashoma vane aesthetic maitiro kana zvasvika pakugadzira rwiyo rwakanaka. Makorokoto kumugadziri weichi chidimbu cheunyanzvi. Imwe yeayo mashoma ayo "maqueros" mazhinji akaonesa
Ndinoda kde, yakanakisa iriko, yandinoda, zvinorwadza kuti komputa yangu haimiriri mhedzisiro yese uye mateki anonaka ane ino desktop, ndinogona kuishandisa asi ndinotofanira kurerutsa nekumisa zvinwiwa zvinonaka 😀 asi iyo haina kufanana: C
Troubleshooting Audio Matambudziko neGigabyte GA-H61M-DS2 Motherboard